नेपाल आज | यस्तै हो भने नयाँ शक्तिमा हिसिला मात्रै बाँकी हुन्छिन् (भिडियोसहित)
आइतबार, २० चैत २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
निर्मल भट्टराईलाई नयाँ शक्तिको विद्रोही नेता पनि भन्दा हुन्छ । महाधिवेशमा अध्यक्ष पदमै उठ्ने घोषणा गरेपछि संयोजक बाबुराम भट्टराईको आँखाको कसिंगर बनेको निर्मललाई अन्ततः नयाँ शक्तिले कारबाही पनि गरेको छ । कारबाहीको मूख्य कारण उनले निर्वाचन बिथोल्नु हुँदैन भनेका थिए । बाबुराम भट्टराई संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर निर्वाचन बिथोल्ने तयारी गरिरहेको बेला निर्मलले सोको विरोध गरेका थिए । निर्मलको भनाईअनुशार यस्तो धारणा राखेपछि नयाँ शक्तिमा उनी हटाउने अवस्था भएन । निर्मलसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार छन्ः
नयाँ शक्ति पार्टीले मुख्यरुपमा आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिएको देखियो । विभिन्न खाले आन्दोलन भए यसकारण अब आन्दोलनको समय होइन, समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता नयाँ शक्तिको देखिएपछि देशभर विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरु नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरे ।
तर पछिल्लो समय आएर त संयोजक भट्टराई त राजनीतिक आन्दोलन नै गर्नु पर्छ भन्न थाल्नु भयो । नाकाबन्दी गरेर ३ करोड नेपालीलाई दुःख दिने मधेसका राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन बिथोल्ने, आन्दोलनमा जाने कुरा गर्न थालेपछि हामीले विरोध गर्यौं । त्यो उहाँका लागि सहन सकिने खालको भएनछ ।
पार्टीको विधान पास भएको भोलिपल्ट मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरे । त्यसपछि त डा. बाबुराम भट्टाराई मसँग बोल्न छाड्नु भयो । मैले नमस्कार गर्दा पनि फर्काउन छाड्नु भयो । मलाई अचम्म लाग्यो, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा उम्मेदवारी दिँदैमा कुनै ठूला नेता किन रिसाउनु पर्ने हो ? म छक्क परें । संयोजक भट्टराईलाई लागेको रहेछ–मेरो कम्पनी (पार्टी)मा आएर मलाई काउन्टर दिने ? सायद यस्तै लागेर होला उहाँले फरक मत, विचार राख्नेहरुलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गर्न थाल्नु भयो ।
माओवादी जनयुद्धमा हुँदा जब कसैलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिन्थ्यो, त्यो कुरा बाबुराम भए ठाउँ पनि पुग्थ्यो । बाबुरामले ‘यस्ता सानातिना कुरा के सुनाको ?’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तर प्रचण्डले चाहीँ सहानुभूति जनाउनु हुन्थ्यो भन्ने पनि बाहिर आएको थियो ।
बाबुराम भट्टराईको लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था खेलाउने वा बोल्ने विषय मात्रै बनेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको त जीवनपद्धती हुनु पर्ने हो । तर उहाँमा लोकतान्त्रिक व्यवहार छैन, शैली पनि छैन । उहाँको पार्टीमा उहाँ बाहेक बाँकी सबै थपना मात्रै हुन् भन्ने मैले बुझें ।
मस्यौदा समितिको सभापति बन्नु भयो । संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु भयो । अनि बाहिर आएर ‘आधा गिलास खाली, आधा गिलास भरिएको’ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । हामीलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । तर हामीले सोचेको थियौं, उहाँले संविधानलाई आत्मसात गर्नुहुनेछ । अहिले आएर के देखियो भने बाबुरामलाई त संविधान नै घाँडो भइसकेको रहेछ ।
संविधन नै असफल पार्न खोज्ने बाबुरामको मिसन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । आर्थिक अनियमितता बढी भएर रामेश्वर खनालले नयाँ शक्ति छाड्नु भयो । नयाँ शक्तिमा केही नेताहरु यस्ता पनि छन् जो दम्पत्ति नै पूर्णकालीन छन् । तर उनीहरुको जीवन शैली हेरौं त, गाडी उनीहरु नै चढछन् । भनेजति खर्च गरेकै छन् । छोराछोरीलाई सुविधासम्पन्न र महंगो विद्यालय, कलेजमा पढाएका छन् । अरु आय देंिखदैन । यस्तो कसरी भयो ?
नयाँ शक्तिमा जो माथिल्लो नेतृत्वसँग नजिक भयो, यसले भनेजति पैसा पाउँछ । अरुले पाउँदैनन् । नेताले पैसा बाँड्ने अरु पार्टीमा हुँदैन । नयाँ शक्तिमा हुन्छ ।
यस्तो विकृति रोक्न रामेश्वर खनालले पनि कोसिस गर्नुभयो । कार्यविधि बनाउनु भयो । तर खनालले नै त्यो पार्टीमा बस्ने अवस्था रहेछ । खनालको कार्यविधिलाई पार्टीमा कसैले मानेनन् । ‘यस्तो कार्यविधिले पार्टी चल्छ ? पैसा नउठाई कसरी पार्टी चलाउने ? आदर्शवादले पेट भरिँदैन ।’ भनेर कार्यविधि टोकरीमा फाल्ने काम भयो ।
Nepali Politics Nirmal Bhattarai